Oromootu Oromoo Ajjeechisiisee - Caboowanci.com-Oromia
March 12, 2018 March 12, 2018 Nadhani	0 Comments Ethiopia, OBN, OLF, OMN, ONN, Oromia
Yeroo ammaa kana kan Ummata Oromoo ajjeessaa fi lafa irraa ficcisissa jiru Wayyaanee Ottuu hin taanee Oromoo dhuma mataa isaati. (Oromootu Oromoo Ajjeechisiisee).Itti gaafatama guddaa kan fudhauu qabu Oromoo mataa isaa ta úu qaba. Lammaffaa irratis hojjiin hojjachamuu qabu tokko jirraachuu kan qabu ture Oromoon kunummitti Ummata issaa irrati dhukaassuu dhiisee qawwee issa gara diinaa irrati akkamitti garagalichuu qaba kan jedhuu irrati hojjatamuutu irra jira ture karaa Maas Miidiiyyaalee Oromoo hundda irran.
Rabbii isinitti haa mulidhisu kinnoo wagaa 6 ni ta´aa erga Barattonnii Oromoo fi Qeerroon Oromoo harka duwwaa bahanii wayyaannee isa amma afaanitti ykn funyaanitti hidhatee faana walfalmaafii lubuu isanii dhabaa turan. Mee itti yaada.
1. Hidhatoota wayyaanee keessa harka meeqatuu Hidhatoota ykn Loltoonni Oromoo harka meeqatuu jira jedhamee yoo gaafatamee harka 100 keessa harki 60 ol Saba Oromoo itti.
2. Akkuma biyyattii Ethiopia jedhamittu keessatti hojjattoonni Sadarkaa xiqaa fi Wardiyyoonni Oromoo dhaa. Ykn Zabanyaa akkasumas Waridiyaa ykn egduu wajjira tokko fi namoota aangoo irra jiraniidhaa. Kana jechuun moo namoonni kun hundaa Hidhata ykn Qawwee ofi harkaa qabu.
Erga Qawwee ofi harkaa qabanii, akkasumas kan ergaa gadi itti kennee Ummata Oromoo ficcisiisuu ta´ee, kan du´aa jirus kan ajjeesisuus erga Oromoo ta´ee mee bakka kamitti hojiin hojjatamee? Xiinixxaltonni, beekitonni, Maasimiddaaloonni Oromoo dhimma kan irrati hojjachuu maaf dadhabamee?
Biyya garaa garaati waligahiiniifi hiriirri nagaa ni bahama. Garuu kun jijiirama tokko illee fijjisiisuu hin dandahaminnee. Akkasums hojiin Gabaa lagaa lagannoo biyyatti keessati taasifamaati jira. Kun hundaa mootummaa Wayyanee akka miidhuu ni beekinna garuu Mootummaa haa midhuu malee irra caala garuu kan miidhamaa jiru Ummata Oromoo isa homaa hin qabinneefi harka dhuwwaa jirudhaa.
Garuu akka salphaatti mootumaa wayyaaneen Tarkaaniif ajjeechaafii murtoo angoo gad dhiisisu kan danda´amuu falaa saliphaa kan ta´uu danda´uu tokko Loltota Oromoo waraana keessa jira, Poolisii Oromia, Lammii Oromoo Poolisii Fedeeraalaa keessa jiran, Lammii Oromoo Waardiyyaa ta´anii Waajjiran hundaa keessa jiraniif hundaa dhaamissa guddaa tokko dabarisanii hojjii guddaa hojjachuun ni danda´ama ture.
Bakka tokkotti hidhataan Lammii ykn Saba Oromoo tokko Lotoota Agazii Ykn Loltoota Federaalaa akkasumas nama qaama mootummaa ta´ee Ummata ficcisiisa jiru irrati tarkaanifii ajjeechaa otuu raawwatamee mee maal gootee wayyaneen qofti Oromoo ajjeesuufi fixuu dandeessi?
Akkuma beekamuu yeroon amma kana keessa Second tokko keessati oddeefannoo gahaa ta´ee argannuudhaafi hojjii irra olichuu kan dandeenyuu dhaa. Kanaafuu caraa argameefi maasimidiyya argameen hunda dhaamissi akkanaa kun hojjii irra oluu qaba. Fakeenyaafi Loltoota Wayyaanee tokko keessati Sabin Oromoo tokko dhukaassa bannee Otuu loltoota wayyanee 20- 30 si´a tokko fixxee isaafi kabaja fi beekumissa maqaa isaatiif saba isaatiifis galimeesisa ture. Asi irrati waan irraanfachuu hin qabinne tokko enyuu gaafa Loltuu wayyanee ta úuf murteessee mana isaa irraa bahuu gaafa tokko akka du´uu murateefi ofi amanisiisee mana isa irraa baha. Haa ta´uu malee amma moo gaafa lammii isaa akka hin taanee keessa jiruufi dhaa íiminni Umuriin hin geenyee raasaasa wayyaneedhaan dhahamanii gaafa ajjeefamani maaf garaan hin arree? Maaf Seenaa tokko hojjachuun maaf dadhabamaa? Silaa hoo guyya guyyaadhaan naminni du´aa maaf tokko ajjeesanii du úun dadhabamee? Oromoon naminni amma kanaa du´ee jechuu qofa maaf dhagahamaa? Oromoon ajjeesee du´ee jechuun maaf hin dhagahaminnee ykn maaf hin barannee?
Akkasumas Oromoon tokko kan ( Air Force) keessa Jettii Balaliisuu maaf dhabama? Kun garuu akka carraa ta´uu ni dadida´aa haalli akka nutti yaanneeti ta´uuf ni ulfaata, haala Bomb itti argatuu qophaa ta´uu kun illee salphaa mitti garuu gara fuunduraatti kana hundaa carraan ta´uu akka qabu ummaniis , hojjatoonnis fi Moottumaan illee beekuu qaba. Wayyaneen haala akkanaatiin rifannaan ajjeechaan ishiin ajjeesituu akka dhaabachuu qabu fi dafitee illee rakkoon cimaa tokko dafee ishii hin muudatiin angoo gadii dhiifitee akka bahuu dandeesuu illee dhiibbaa irrati fiduu ni danda´aa.
Kanaafuu Namoonni Firoota bakka amma maqaan dhahamee keessa qabiddanifii beekitan hundaa ergaa kana isaniifi dabarsuufi irrati hojjachuun dirqama. Sababiin isaa yeroo amma kana Oromoon Loltuu qabaatee wayyanee ummata keenyaa fixaa jirtuu irraa dhuuwwuun hin danda´aminne waan ta´eefi Gabaa Laganaafi mana keessaa bahuu dhabuun wayyaanee irrati dhiibbaa tokko illee hin fiduu.
Ummanni gabaa Laganna kana fi mana keessa bahuu dhiisuu kana illee ji´aa tokko illee otuu godhee wayyaaneen waan ishii dhaaf ta´uu kan wagaa 100 tokkoo itti fayyadamuu dandeessu duri Oromia irraa saamattee ofi qopheesitee jirti. Kana waan ta éef Umata isa homaa hin qabinne qofatuu midhama jechaadha. Kanaafuu Mootummaan wayyaanee kan rifachuufi dadhabuu kan danda´uu hidhatoota Oromoo qaama mootummaa keessa jiran hundaa irraati hojjachuu, akka qawwee ykn hidhata hin baafannee irrati hojjachuu. Mootummaa kana irrati duuluun fi dhimma akkanaa irrati hojjachuun barbachissaadha.
← Konsartii Oromoo Frankfurt Germany irrati
Gurgurtaa Websaayitii kanaa →